November 2020 - Ebihani.com
एक दिन मात्र ढिला आएको भए तिम्रो बुबालाई नगरपालिकाले गाडिदिन्थ्यो । र, तिमी जिन्दगीभर बुबाको लास खोजिरहन्थ्यौ,’ आजभन्दा १६ वर्षअघि विनयजंग बस्नेतलाई टिचिङ अस्पतालका कर्मचारीले भनेका वाक्य हुन् यी । त्यतिवेला विनयका बुबाले सडकबाटै बेवारिसे अवस्थामा दुनियाँ त्यागेका थिए । बस्नेतले बुबाको शवको ठेगाना खोज्दै दुई दिन सहर चहारे । सहरका अँध्यारा गल्ली, बेवारिसेहरू भेटिने चोक, सडकहरूमा खोजे । तर, कतै भेटेनन् । न बुबा कुन सडकको कुन पेटीमा निदाउँछन् भनेर नै थाहा थियो उनलाई ।
‘अन्तिममा अस्पतालतिर चाहरेँ,’ विनय भन्छन्, ‘तीन–चारवटा अस्पताल चहारेपछि टिचिङ अस्पतालमा आठ–दश शवको थुप्र्रो भेट्टाएँ ।’ सिमेन्टीको चिसोले सुन्निन थालेका शवहरूमध्ये बुबाको शव पहिचान गर्नै गाह्रो भयो उनलाई । सबै शव एकै किसिमका देखिन्थे । सबै शवको हालत उस्तै थियो । भलै हुलिया मात्र फरक थियो । तर, केहीबेरको सोधखोजपछि चिह्नहरूका आधारमा बुबाको शव पहिचान गरे । ‘तर, बाँकी शवहरू कसका होलान् ? यिनीहरूका आफन्त कहाँ होलान् ?’ उनको मनमा यही प्रश्नहरू घुमिरह्यो ।
बाँकी शवहरू आफन्तविहीन थिए । निःसहाय थिए । बाँच्दासम्म राम्रो परिचय नपाएका र मरेपछि झनै परिचयविहीन बनेका शवहरू केवल शव मात्र थिएनन् । ती शवहरू सडकका पेटीबाट अस्ताएर खाडलमा पुरिन लागेका ‘भुसका थुप्रो’जस्ता थिए । बुबाको शव बस्नेतले पहिचान गरिसकेपछि अस्पतालका कर्मचारीले फेरि भने, ‘तिमीले त बुबा भेट्टायौ, अब किरिया गर्छौ । दागबत्ती दिन्छौ । तर, यिनीहरूको पहिचान खुलेको छैन । अब नगरपालिका आउँछ, लिएर जान्छ र गाडिदिन्छ ।’
बस्नेत समयमै अस्पताल नपुगेको भए नगरपालिकाले उनको बुबाको शव लिएर जान्थ्यो, पहिचान नखुलेको र बेवारिसे भनेर कतै खाल्डोमा पुरिदिन्थ्यो । बस्नेत सुनाउँछन्, ‘एक दिनअघि मात्रै त्यहाँ नपुगेको भए म जिन्दगीभर बुबाको लास खोजिरहेको हुने थिएँ हुँला ।’
विनयको बुबाको मृत्यु भयो । उनकी आमा सानैमा बितिन् । घर त थियो, ललितपुरमा । परिवार पनि थियो । सबै राम्रो थियो । तर, समयले बस्नेतलाई पनि सडकमा ल्याइपुर्‍यायो । बस्नेत बेवारिसे भए । सडकमा रातहरू काट्न थाले । सडकमै दिनहरू बिताउन थाले । बुबाको मृत्युपछि विनयले नौ वर्ष सडकमा गुजारे । त्यसवेला विनयको परिचय एउटै थियो, ‘बेवारिसे’ ।
‘बेवारिसे’ परिचयको कारक भने उनी स्वयं थिए । उनी जाँडरक्सीको लतमा फसे । सडकमा आइपुगे । श्रीमतीले छाडेर गइन् । छोरीले ‘बाबा’ भन्न छाडिन् । घरको गेट बन्द भयो । विनय भन्छन्, ‘आफन्त, परिवारबाट माया नपाउँदा सडकमा आइपुगेँ ।’ल्यामपोस्टमुनि सिमेन्टीको चिसोमा बिताएका रातहरू सम्झिँदा अहिले पनि बस्नेतको आँखा रसाउँछ । ती भोका, अनिँदा, अपहेलित दिनहरू सम्झिँदा उनको गला अवरुद्ध हुन्छ । उनी बोल्न सक्दैनन् । त्यो रित्तो, शून्य, विरक्तलाग्दो स्मृतिहरूमा फर्कँदा उनी बोल्दाबोल्दै रोकिन्छन् र मौन बसिदिन्छन् ।
बस्नेत भन्छन्, ‘कोही मान्छे सडकमा यत्तिकै आउँदैन । केही न केही कारण जरुर हुन्छ ।’ सडकमा बस्नेतजस्ता सयौँ मान्छे थिए, अहिले पनि छन् । कत्ति खान नपाएर मर्छन् । आफन्त आउँदैनन् । उपचार गरिदिने मान्छे हुँदैन । भनेको वेला खान पाउँदैनन् । कसैले केही देला भनेर आस गरिबस्छन् । तर, ‘बेवारिसे’ भनेर अपमानसिवाय अरू पाउँदैनन् ।
‘कोही आएर मसँग हात मिलाइदिए पनि त हुने । कसैले आएर केही सोधे पनि त हुने । कोही आएर केही बोलिदिए पनि त हुने भन्ने चाहना हुन्छ सडकका मान्छेहरूको,’ बस्नेत देखेको र भोगेको कुरा सविस्तार सुनाउँछन्, ‘त्यो कुराले मलाई जहिल्यै पोल्थ्यो । अहिले पनि पोल्छ । म आफैँ त्यो नमिठो अनुभूति र अपेक्षाबाट गुज्रिएको छु ।’
सडकका मान्छे जहिल्यै रक्सी पिउन खोज्छन् । रक्सीको नशामा हुन्छन् । अलिकति पैसा माग्यो, रक्सी पियो । कसैकसैले चामल दिन्छन्, त्यो पनि होटेलमा लग्यो, रक्सीसँग साट्यो । भात नै नखाई आखिर किन त्यसो गर्छन् उनीहरू ? ‘खासमा उनीहरू बेहोसीमा खुसी खोज्न चाहन्छन् । आफन्तबाट एकदम विक्षिप्त बनेका हुन्छन्,’ बस्नेत सुनाउँछन्, ‘र खुसी हुने बहाना खोज्छन् । बहाना त्यही नशा भइदिन्छ । म पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिएको हुँ । र, परिवारबाट अलिकति पनि माया नपाउँदा बेवारिसे भएँ । मान्छेले झुन्डेर मर्ने, विष खाने यस्तै कारण त हो ।’
बस्नेतलाई पनि आफन्तहरूले केही गर्छ भनिरहन्थे । तर, आफन्तको सपना तुहियो । उनी सडकमा पुगे । अहिले नौ वर्षपछि उनको जिन्दगी सडकबाट थोरै उठेर पुनस्र्थापना केन्द्र्रसम्म पुग्यो । त्यहाँबाट पनि फेरि फर्किएर सडकमै आइपुग्ने सम्भावना पनि थियो । कति त त्यहाँ पुगेर पनि सडकै फर्किएका छन् । र, सडकमै अस्ताएका छन् । तर, उनी भने फर्किएनन् ।
‘नौ वर्षअघि मैले नयाँ जीवन पाएँ । जुन समयमा म सडकमा मर्न मात्र बाँकी थिएँ । मरेको भए बेवारिसे हुने थिएँ,’ भन्छन्, ‘नयाँ जीवनपछि मैले निर्णय लिएँ कि अब मैले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । कोही सडकमै बेवारिसे भएर मर्दै गर्दा खाल्डोमा पुरिने होइन, उसले दागबत्ती पाउनुपर्छ, सदगत हुन पाउनुपर्छ ।’ त्यसपछि बस्नेतले बेवारिसे शवहरूलाई दागबत्ती दिन थाले ।
अहिलेसम्म ३०६ वटा शवलाई दागबत्ती दिइसकेका छन् । करिब सात वर्ष भयो, उनले दागबत्ती दिन थालेको, सद्गत गर्न थालेको । केही वर्ष यसरी नै व्यक्तिगत पहलमा दागबत्ती दिइरहे । अलिपछि प्र्रहरीहरूले नै भने, ‘तपाईं एउटा संस्था खोलेर काम गर्नुस्, अलि सजिलो हुन्छ । सहयोग पनि पाइन्छ ।’ उनले संस्था खोले ‘बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र’ ।
विनयजंग भन्छन्, ‘म बाँचेसम्म यो काम गरिरहन्छु । म मरेपछि यो काम सपनाले अगाडि बढाउनुपर्छ । किनकि सपना मेरो छोरा हो । म मरेपछि उसैले मलाई दागबत्ती दिनेछिन् ।’
पछि जोडिन आइपुगिन् सपना रोका मगर । जसलाई भर्खरै बिबिसीले विश्वका एक सय प्र्रेरणादायी महिलाको सूचीमा राखेको छ । सपनासँग विनयको पहिलो भेट छोरी विदेश पढ्न जाने क्रममा भएको थियो । जतिवेला बस्नेतले नयाँ जीवनको यात्रा सुरुवात गरिसकेका थिए । परिवारबाट प्रेम पाइसकेका थिए । बस्नेतकी छोरी त अस्ट्रेलिया उडिन्, तर सपना उड्न पाइनन् । सपना यतै रहिन् । यतैको गल्ली र सडकमा रहिन् । बस्नेतले झैँ चिसा रातहरूमा निद्रा खोजिबसिन् ।
सपनासँग पछि फेरि भेट भयो बस्नेतको । यस बखत सपना पनि बेवारिसे जीवनबाट फिरिइसकेकी थिइन् । सडकबाट एक सिँढी माथि उक्लिसकेकी थिइन् । र, यहाँनेर दुवैको यात्रा सँगै भयो । किनकि कथा दुवैको उस्तै–उस्तै थियो । बस्नेतले सपनालाई धर्मछोरी बनाए । छोरीसँगै शवको दागबत्ती, सद्गतका काम गर्न थाले । सुरुसुरुमा सपना विनयसँगै शव लिन जाने गर्थिन् । शव बोकेर ल्याउने गर्थिन् । अलि पछि बस्नेतले ‘तिमीले पनि दागबत्ती दिनुपर्छ, तिमी छोराभन्दा कमजोर छैनौ’ भनेर सपनालाई भने । त्यसपछि सपना पनि तयार भइन् ।
एकपटक तीनवटा शव उठाउनुपर्ने भयो । महिनौँ अलपत्र रहेर कुहिएको थियो शव । शवलाई दुवैले उठाउँदै थिए । तर, अचानक एउटा शवको खुट्टा चुँडिएर सपनाको कानमा ठोक्कियो । त्यो पल हाँस्दै सुनाउँछन् बस्नेत, ‘सपनाको कानमा लास उछिट्टिएपछि ‘बाउ, लासले त लात्ती पो हान्यो’ भनिन् ।’ आफू जिउँदो रहेसम्म यही काममा सक्रिय रहने बस्नेतको सोच छ । उनको छोरा छैन ।
छोरी विदेशमा छिन् । ‘सपना मेरो छोरा हो । म मरेपछि उसैले मलाई दागबत्ती दिनेछिन्,’ भन्छन्, ‘म बाँचेसम्म यो काम गर्छु । म मरेपछि यो काम सपनाले अगाडि बढाउनुपर्छ । उनले बढाउने पनि छिन् । उनको हिम्मत नजिकबाट देख्नेहरूले थाहा पाउँछन् । उनी चानचुने छोरी होइनन् ।’ (नयाँपत्रीका)
बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गरी आजको राशिफल मंसिर १३ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु नौ महिनापछि कतारमा
काठमाडौं, वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
बन्द भएको झण्डै ९ महिनापछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण सुरु गरेसँगै नयाँ श्रमिक भर्ती गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो।
दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताए।
कोरोना संक्रमणका कारण गएको फागुन २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया बन्द भएको थियो। दूतावासले समेत माग प्रत्र प्रमाणिकरण गर्न छाडेपछि कतारबाट कामदारको माग आउन सकेको थिएन।
त्यहाँस्थित कम्पनीले नेपाली श्रमिक माग गर्दा दूतावासमा सबै जानकारीसहित निवेदन दिनुपर्छ।
दूतावासले कम्पनीको अवस्था, श्रमिकका लागि आधारभूत व्यवस्था लगायतको अनुगमन गरेर मागपत्र स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ।
दूतावासको अनुमतिपछि मात्रै श्रमिक भर्ना गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति दिन्छ। विभागबाट स्वीकृति लिएपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदार भर्तीको प्रक्रिया सुरु गर्न पाउँछन्।
अब म्यानपावर कम्पनीले कतारबाट श्रमिकको माग ल्याएर नयाँ श्रमिक पठाउन पाउनेछन्। यसअघि वैदेशिक रोजगारी खुल्ला भएपनि नयाँ श्रमिक कतार जान पाएका थिएनन्। बिदामा आएका श्रमिक मात्रै कतार फर्किएका थिए।
मागपत्र बन्द भएकै कारण वैदेशिक रोजगार ठप्प थियो। अब नयाँ माग ल्याएर वैदेशिक रोजगारी सुरु गरिने र यसबारेमा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जानकारी गराइसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए।-उजिर कार्की/नेपाल खबर